Myanmar Enterprise Solutions
IKBZ General Insurance ပိတ်သိမ်း
IKBZ မှာ ကုမ္ပဏီ ၃ ခုရှိပါတယ်။
1. IKBZ General insurance Co.,Ltd
2.IKBZ life insurance Co.,Ltd
3. IKBZ insurance Co.,Ltd
အခုပိတ်သိမ်းတာက foreign company အဖြစ် register လုပ်ထားတာကိုပဲ ပိတ်တာပါ။ အများထင်နေသလို အဓိကကျတဲ့ ikbz insurance ကိုပိတ်တာမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားနဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ဖို့ ထောင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကိုပိတ်တာပါ။ ဖြစ်နိုင်တာက company ကို restructure လုပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပြီး အများထင်နေသလို စီးပွားပျက်လို့ မဟုတ်ပါ။ KBZ bank ပိတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ပူနေသလိုလည်း လုံးဝမဟုတ်ပါ။
Myanmar Enterprise Solutions ... See more
ရန်ကုန်ရှိ ကုန်သေတ္တာတင်ယာဉ်များကို အများပိုင် ကုမ္ပဏီအောက် ထားရှိရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်နေကြသော ကုန်သေတ္တာ တင်ယာဉ် အားလုံး... ... See more
သွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပြည်ပမှ ကုန်ချောပစ္စည်းတင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်းမျ.... ... See more